Dowladda Itoobiya oo 50 million oo Birr oo ah ku wareejisay maamulka DDS (Sawirro) – Radio Daljir
Dowladda Itoobiya oo 50 million oo Birr oo ah ku wareejisay maamulka DDS (Sawirro)
Diseembar 2, 2021 9:54 b 0
Wasiirka Macdanta iyo Tamarta ee dalka Itoobiya ingineer Takale Umma ayaa maanta Deegaanka Soomaalidda ku soo wareejiyay 50 million oo Birr oo ah lacagta canshuurta dhulka ee sanadkan laga qaaday shirkadaha ku hawlan baadhitaanka shidaalka deegaanka. Waa biloow fiican. Waxaan wasiirka ku adkeeynay ahmiyadda ay leedahay in cadcadaan balaadhan laga muujiyo dhaqaalaha laga helo shirkadaha shidaalka baadha si looga gudbo shakiyadda ka abuurmay qaabkii nidaamkii hore u maamuli jiray arimahan xaasaasiga ah. Waxaan isla qaadanay in dhawaan Wasaaraddu Golaha Fulinta ee DDS hor keeni doonto soo jeedin arintaa la xidhiidha.
Dowladda Deegaanka Soomaalida 367 Wararka 27574
Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake: “Waxaan maanta Muqdisho u imid badbaadinta dalka” (daawo)